कसरी भयानक नयाँ सार कलाकारहरू रचनात्मक सोच्दछन्?
डेभिडब्रिडबर्ग नोभेम्बर 1, 2020 मार्च 23, 2021
अमूर्त कलाकार र कला: कालो र सेतो, परिभाषा, ज्यामितीय, र आधुनिक
एक आरम्भकर्ताको रूपमा चाहानुहुन्छ कलामा कतै सुरु गर्न तपाई कतै सुरु गर्न आवश्यक छ। म आशा गर्दछु कि तपाईले मेरा लेखहरू रमाईलो पढ्नुहुनेछ। KISS र सिर्जना गर्नुहोस्, तपाईं एक रमाईलो सार कलाकार हुन सक्नुहुन्छ।
सीधा अगाडि डिस्क्लेमर: मेरो कथामा टाँस्दा तपाईले अमूर्त कलाकृतिको क्षेत्रको बारेमा धेरै राम्रो विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन अन्य कलाकारहरू बारे मेरो धारणा बिना नै गर्दछ।
अमूर्त कलाकारहरूका बारे तपाईको धेरै विचारहरू छन्। हामी हाम्रो उपकरण र समय को उत्पादन हो। आज डिजिटल युगमा, म एक पोस्ट आधुनिक कलाकार हुँ। विगतबाट सिर्जना गर्दै र केहि अनौंठो प्रस्तुत गर्दछ।
समय बित्दै जाँदा आधुनिक अमूर्त कला युद्ध हुनु अघि WW II पछि एब्स्ट्र्याक्ट अभिव्यक्तिवाद भयो। १ 1980 s० को दशकमा, प्रतीकात्मक र अमूर्तहरूको मिश्रण गर्ने सोच धेरै कलाकारहरूको लागि पेचिलो भयो।
मेरो अवधारणा यी कोटीहरूमा पर्दैन। डिजिटल उपकरण प्रयोग गरेर, म पोस्ट आधुनिक कला सिद्धान्त पूरा गर्दैछु। सामान्यतया म प्रत्येक दुई टुक्रा मा बनाउने दुई वा तीन विधा मिश्रण गर्दछ। त्यो कलाको मिश्रण मेरो कलाको विभिन्न अमूर्त कार्यहरूको पछाडिको तर्क हो।
आज यहाँ अमूर्त कलाकारहरुको पुनरुत्थान छ जो डिजिटल उपकरणका कारण बिल्कुल फरक छन्।
तपाईं मेरो कलाकृति महसुस को रूप मा हेर्नुहोस् तपाईं एक धेरै अनौंठो अनुभव मा संलग्न हुनुहुन्छ।
म मेरो सार कला र अधिक पोस्टर र क्यानभास प्रिन्टको रूपमा प्रस्ताव गर्दछु।
एब्स्ट्र्याक्ट कलाकारहरूका लागि स्वीकृति
मैले सुरु गर्नु भन्दा पहिले, म मेरो अग्रदूतहरूलाई क्रेडिट दिन चाहन्छु। JMW टर्नर देखि पिकासो देखि पोलक फ्रान्ज Kline, र अधिक धेरै अमूर्त कलाकार।
म भन्दा पहिले आउनेहरूलाई म मेरो सबै काममा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्छु। के मैले गरेको छ धेरै अनौंठो छ, र वास्तव मा धेरै मूल मा सीमा। मलाई मेरो मार्ग प्रशस्त गर्न धेरै कला ईतिहास चाहिन्छ।
यो लेख मेरो सोच र कलाकृति को एक नमूना हो। यो पढेर तपाईं विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ कि म एक अमूर्त कलाकार हुँ। अमूर्त कला मेरो कामको शरीरको माध्यमिक हो।
सार कला कालो र सेतो
कालो र सेतो छविहरूको साथ, म धेरै राजनीतिकबाट मेरो पोस्ट मोडर्निज्मको धेरै जरामा, पुरानो उत्कृष्ट कृतिहरूको प्रयोगमा स्विच गर्छु।
यो पहिलो काम धेरै राजनीतिक छ। म टिप्पणी गर्न मा सावधान हुन जाँदैछु। तपाईं यो कामको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ।
अमेरिकी बौद्धिक4डेविड ब्रिडबर्ग द्वारा
पोष्ट कला पोष्ट, अमेरिकी बौद्धिक भित्ति आकार4x feet फिट सम्म आउँछ। सानो आकारको प्रिन्टहरू सुन्दर र शक्तिशाली फ्रेम गरिएका छन्। यस विशेष टुक्रामा अन्तर्निहित छविहरू एडवर्ड एस कर्टिस फोटोहरू हुन्।
मेरो पोस्ट आधुनिक सिद्धान्तको प्रयोग तुरून्त प्रस्ट हुँदैछ। मैले के गरेको छु डिजिटल उपकरण प्रयोग गरेर नयाँ छवि बनाउनको लागि विगतको छवि प्रयोग गर्नुहोस्।
"पुरानो टोपी", तपाइँ भन्नुहुन्छ। केही तरिकामा तपाईं सहि हुनुहुन्छ। फरक यो छ प्रारम्भिक अंगीनकर्ताहरूले कलालाई विडंबना बनाउँछ। यो गम्भीर ललित कला हो। मोना लिसाको स्कर्ट बढेको छैन जब उनी सिगरेट खाँदै थिइन।
मेरो कलाकृति पोस्ट आधुनिक सिद्धान्तमा पर्दछ, तर समय भन्दा बाहिर छ। सिद्धान्त दशकौं पहिले स्थापित भएको थियो। त्यसो भए के दिन्छ? डिजिटल उपकरण दिन्छ। मेरो वैचारिक कल्पनाले दिन्छ। विगतले दिन्छ। वर्तमान दिन्छ। यो रचनात्मक नयाँ काम हो।
वास्तवमा भिजुअल आर्टमा उत्तर आधुनिकतासँग वास्तवमै थोरै मात्र गरिएको थियो किनभने यो सिद्धान्त कल्पित थियो। वास्तवमा विधाको रूपमा त्यहाँ एउटा दर्शन मात्र थियो। हालसालै न्यु योर्क ग्यालरीहरूले संशोधन संशोधन बिक्री प्रयास गरेका छन्। मैले जोडेको वैचारिक धार मबाट मस्तिष्क बाहिर छु।
उत्तर आधुनिकता को दर्शन धेरै सरल छ। यसभन्दा पहिले सबै चीजहरू सकिसकिएको छ, विगतको प्रयोग गरेर हामी केही नयाँ सिर्जना गर्छौं। दुईवटा पहिलेका मुद्दाहरू जुन यस विधालाई सुस्त बनाउँथे कम्प्युटरहरूको अभाव र पहिलेका कलाकारहरूको साहस। व्युत्पन्न कलाकृति artworld मा अन्तिम निषेध थियो।
यी दुई अर्को बहिनी टुक्रा वा हुन सक्छ भाई टुक्रा हुन सक्छ। माइकलएन्जेलोको "स्ट्याच्यू अफ डेभिड" को बस्ट केन्द्र केन्द्र लिन्छ।
यी दुबै मेरो हुन् समकालीन संग्रह। एक अर्को पछि लाग्छ। खेल विशुद्ध सार हो। यस संग्रहमा विचारहरू विकास हुन्छन्। कामबाट काममा सर्दा विषय एक वस्तु बन्छ। तब वस्तु एक न्यूनतम आइकन हुन्छ।
समकालीन १२ डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा माइकल एंजेलो
दुई मध्ये, मैले तल यो चित्रको साथ शुरू गरें। मेरो कलात्मक इनाम साकार गर्नुहोस् र माथिको छवि सिर्जना गरिए जस्तो गरी देखाइएको छ।
माइकल एन्जेलो के सोचिरहेको थियो? उहाँ एक अमूर्त कलाकार हुनुहुन्न थियो। यो कला अस्पष्ट छ कि उसले यी दुई कलाहरू देख्न सक्दछ कि धेरै अस्पष्ट छ। उसको संस्कृति वास्तवमै लामो समयको लागि यस प्रशिक्षणको लागि थिएन।
माइकलएन्जेलोका लागि यी दुई कामहरू लाक्षणिक कार्यहरू हुने थिएन।
अर्को धेरै धेरै राजनैतिक हुँदैछ। आज हाम्रो राजनीतिको केन्द्रबिन्दु।
यो कालो र सेतो एक अल्पसंख्यक हुनु को बारे मा छ सेतो को समुद्र मा छ। मैले पक्ष लिन कालो मा कलाकारको रूपमा हस्ताक्षर गरेको छु।
डेभिडब्रीडबर्ग द्वारा भर्खरको 32
यो टुक्राले प्रश्न सोध्दछ, "मान्छेहरू के सोचिरहेका छन्"? म यहाँ अन्य कलाकारहरु बाट लिएको छैन। म साँढाहरू द्वारा साँढे लिन्छु र म के भन्न आएँ भनेर भन्छु।
सार कला परिभाषा
यथासम्भव सरल बनाउँदा, अमूर्त कला अमूर्तताको धारणाबाट आउँदछ। यदि तपाइँको परिवारको कोठामा ऊन कम्बल छ भने यसको केवल तीन वर्ग इन्च लिने सोच्नुहोस्। त्यसो भए ती तीन इन्चलाई तीन फिट क्यानभासमा उडाउनुहोस्। अमूर्त अब ऊनी कम्बलबाट वर्ग को रूपमा मान्यता योग्य छैन।
त्यहाँ कला को एक काम छ। अब कुनै लाक्षणिक अभिव्यक्ति ड्रप गर्नुहोस्, र सिर्जनाको विश्व खोल्नुहोस्।
प्रत्येक डिजाइन तत्व नयाँ काम गर्न सकिन्छ। प्रत्येक प्रविधिको नयाँ काम गर्न सकिन्छ। अमूर्त अभिव्यक्तिवाद त्यहाँबाट विकसित गरिएको छ।
तपाईंले सम्भवत अर्को चित्रको आनन्द लिनुहुनेछ। तिनीहरू नियो क्युबिज्म हुन्। यो जहाँ म मोन्ड्रियन क्युबिज्म लिन्छु। तिनीहरूको पछि पोस्ट आधुनिक बनाउँदै, न्यु क्युबिज्म, र अमूर्त कला। पोस्ट आधुनिक मेरो छाता शब्द हो।
सार कला ज्यामितीय
मोन्ड्रियनको क्युबिस्म ज्यामितीय सन्तुलनको बारेमा थियो। यी दुई कार्यहरूले मन्ड्रियनलाई श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछन्।
अमूर्त आर्ट ज्यामितीय एब्स्ट्र्याक्सनमा यसको आफ्नै दृष्टिकोण हो। यो महत्त्व राख्छ किनकि म अन्य अमूर्तका अन्य प्रकारहरूमा बदल्छु। विशेष रूपमा आधुनिक अमूर्त कलाले वक्र वा जैविक रूपहरूमा काम गर्दछ।
स्थानिक सम्बन्ध प्रत्येक मा फरक छन्। दुबै तीन आयामिक छन्। पोस्ट मॉडर्न आर्टमा कुनै र color्ग थियरी छैन। यसको सट्टामा काम गर्न मैले आफ्नै र the्गको थियरीहरू बनाएँ। मेरो र color्ग सिद्धान्तहरूमा एक स्थिरता कलाको एक टुक्रामा र colors्गहरूको सेट भरमा टोनहरू मिलाउन कार्य गर्दछ।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा भर्खरको १
यी कार्यहरूमा हस्ताक्षरहरू चंचल छन्। म अक्सर आफ्नो कला संग स्वतन्त्रता लिएको थियो।
भर्खरको २ 27 एक प्रयोग थियो। हवाईजहाज तोड्दै र रचना बनाउँदा गतिमा सारिएको अमूर्त सिर्जना भयो।
मैले केहि रमाईलो गर्न सकेको देखेर, मैले यसलाई स्वयं पोर्ट्रेट भनेँ।
भर्खर 33 XNUMX अत्यधिक संगठित छ, तर रचनात्मक प्रक्रिया धेरै अनियमित थियो। फेरि रहरू टोनको लागि धेरै नजिकबाट मिल्दछन्। सौन्दर्य एकीकृत छ।
फेरि मसँग के भएको महसुस गर्दै, म Recent 34 लाई मेरो प्रोटोटाइपको रूपमा प्रयोग गरेर भर्खरको as 33 सिर्जना गर्दछु। यो अब कलाको एब्स्ट्र्याक्ट काम छैन। सिर्जना अझै ज्यामितीय छ।
विचारहरूको ज्यामितीय प्रकृतिमा पुग्नुहोस् मैले चमकदार रंगहरूको तहहरूको बाहिर क्रस सिर्जना गरें। एकै रंग दुई पटक प्रयोग नगर्नुहोस्। यो प्रयोग राम्रोसँग खिच्न सकिन्छ, यदि म आफैले भने।
मेरो थिम गरिएको संग्रह बीचमा केहि अधिक ज्यामितीय एब्स्ट्र्याक्टहरू छन्। म तपाइँको लागि रमाईलो को साथ लेख को यो खण्ड बन्द गर्न चाहान्छु।
केहि आधुनिक ज्याजको बारेमा सोच्नुहोस्, सायद चार्ली पार्कर वा माइल डेभिस। सिन्कोपेट गरिएको तालको बारे सोच्नुहोस्।
के धेरै कलाकारहरू भागे, ताल अन्तर्निहित हो। सिन्कोपेशनको अनौंठो बिटहरू भिन्न रंग हुन्।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा सुन्तला
त्यो मेरो सोच हो। मसँग केवल केहि थोरै नगगहरू छन् जुन तपाईंलाई प्रस्तुत गर्दछ कि अन्य कलाकारहरू तपाईंसँग कसरी पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्छन् भनेर सोच्दछन्।
भर्खरको x शब्द आधुनिक x शब्दको पर्यायवाची शब्द हो। मैले मेरो पोस्ट समकालीन संग्रहमा भएको संक्षिप्त अवधारणा सिर्जना गर्न शब्दहरू संगीत नोट्स x मार्फत पनि गरे। मेरा अन्य धेरै संग्रहमा, रस्टिक एक्स कलाकारको नाम, ब्लेन्ड एक्स कलाकारको नाम, र इनभ (erse) ब्लेन्ड एक्स कलाकारको नाम ... .. आदि…। प्रयोग भएको छ।
पोष्ट पप कला मेरो अमेरिकी बौद्धिक संग्रहमा राखिएको थियो, अमेरिकी बौद्धिक x शीर्षक प्लेसहोल्डर हो। पहिलेको महान आन्दोलनको सम्बन्ध आधुनिक कला आन्दोलनको साथ मिलेर मिसियो। फेरि छाता विधा पोष्ट मॉडर्न हो।
मेरो वेबसाइट मा कला को संग्रह, Bridburg.com, धेरै संगठित छन्। स within्कलन भित्र कला बनाउन म निर्माण कार्यहरू सेटअप गर्दछु। संग्रह भित्र अधिक कलाको विकासको लागि निर्माणहरू सार्दै। त्यसो भए म नयाँ संग्रह विषयवस्तुको लागि निर्माणको नयाँ सेट तैयार गर्दछु।
अन्य अमूर्त कलाकारहरू शीर्षक प्लेसहोल्डर "शीर्षकविहीन x" प्रयोग गर्छन्। १ 1960 s० को दशकका कलाकारहरू र यस भन्दा पछाडि तिनीहरू शफलमा हराउँछन्।
पछि अमूर्त कला अनलाइन स्थानान्तरण गर्दा शीर्षक "शीर्षक बिना x" कम्प्युटरहरूको लागि धेरै समस्याग्रस्त हुन्छ। अझै खराब कलाकारहरूको लागि, सार्वजनिक रूपमा शीर्षकको खोजी गर्न मिल्दैन सार्वजनिक रूपमा "शीर्षक नभएको x" को रूपमा। धेरै जसो कलाकारहरूले धेरै थोरै शीर्षकहरू प्रयोग गर्थे।
काम समयको लागि हरायो।
जबकि म त्यो कलाकारको पुस्तामाइनँ र उनीहरूको दुखाइ महसुस गर्न सक्दिन, तिनीहरूको ग्यालरीहरूको लागि स्थिति अस्थिर छ।
यस बिन्दुमा तपाईसँग राम्रो छलफल गर्न पनि म ग्यालरी कलाकार होइन। मेरा अभिव्यक्तिहरू गेटकीपरहरूबाट स्वतन्त्र छन्। म यहाँ तपाई संग सीधा कुराकानी गर्दै छु। मेरो लक्ष्य तपाईंको मनोरन्जन हो।
यदि मलाई पछि मान्यता प्राप्त भयो भने त्यो राम्रो हुनेछ।
सार कला आधुनिक
आधुनिक कलाको उचाई WW II भन्दा पहिले थियो। त्यस अवधिमा थियोरिizing्गको बारेमा सोच्न आश्चर्यजनक छ, फ्रायडदेखि मार्क्सदेखि आइन्स्टाइन। हाम्रो उद्देश्यका लागि पिकासोको साथ सुरु गरौं।
पाब्लो पिकासोलाई उनको समयको बारेमा सबै कुरा थाहा थियो। उनी धेरै अमूर्त कलाकार थिए। ऊ AbEx कलाकार थिएन।
पिकासोलाई श्रद्धांजलि अर्पण गर्दै, म तपाईंलाई दशकौंसम्म मेरो उत्प्रेरणा दिने उनको छवि देखाउनेछु।
पाब्लो पिकासो द्वारा महिला
छवि उचित उपयोगको रूपमा प्रदर्शित भइरहेको छ र निश्चित रूपमा म द्वारा बिक्रीको लागि होईन।
अर्को यो मेरो अधिक सामान्य आधुनिक सार हो।
यदि अर्को दुई रंगहरू तपाईंलाई अस्पष्ट रूपमा परिचित देखिन्छ कि किनकि मलाई लाग्छ डिक्सी कपहरूले यस र this संयोजन प्रयोग गर्‍यो। सम्भवतः डिक्सीको रंगहरू हल्का हल्का शेडहरू थिए।
छवि मुद्रण आकारहरुमा नौ फिट सम्म भित्ति चित्रको रूपमा आउँदछ। यो अमेरिकी बौद्धिक छवि नवाचार को बारे मा आवाजहरु बोल्छ।
अमेरिकी बौद्धिक 18 डेविड ब्रिडबर्ग द्वारा
संगीतको साथ उठ्नको लागि तपाईंको शरीरलाई नाच गर्न दिनुहोस्।
सबैजना यहाँ गुम्बज हुन्, बासको साथ पछाडि
जाम प्रत्यक्ष प्रभावमा छ र म समय खेर फाल्दिन
एक डोप कविता संग mic मा
लयमा जानुहोस्, जम्प गर्नुहोस्, ताल जम्पमा जानुहोस्
र म यहाँ छु
बीट्स र गीतहरु तपाइँको प्यान्ट हिलाउन को लागी
एक मौका लिनुहोस्, आउनुहोस् र नाच्नुहोस्
साथीहरूले केटी समातिन्, पर्खनुहोस्, उनको घुमाउरो बनाउनुहोस्
यो तपाईंको संसार हो र म मात्र एउटा गिलहरी हुँ
प्रयास गर्नुहोस् 'तपाइँको बट सार्न एक काष्ठफल प्राप्त गर्न
नृत्य भुँडीमा, त्यसोभए के भयो
हावामा हातहरू, "हो" भन्नुहोस्
सबै जना यहाँ छन्, सबैजना त्यहाँ छन्
भीड जीवित छ र म यो नालीको पछि लाग्छु
घरमा पार्टीका व्यक्तिहरू सार्नुहोस् (तपाईंको दिमागलाई दिनुहोस्)
ग्रूव (मलाई लाइनमा राख्नुहोस्) आउनुहोस् पसिना, बच्चा
संगीत नियन्त्रण लिन दिनुहोस्
ताल तपाईंलाई सार्न दिनुहोस्
स्रोत: LyricFindगीतकारहरू: फ्रेडरिक विलियम्स / रॉबर्ट क्लीभिलिस गोनाले तपाईंलाई पसीना बोक्यो (अब नाउ सबैको नाच हुन्छ) [१ 1991 XNUMX १ हाउस डब / बोनस बीट्स] गीत © सोनी / एटीवी म्यूजिक पब्लिशिंग LLC, वार्नर चैपल म्यूजिक, इंक, युनिभर्सल म्यूजिक पब्लिशिंग ग्रुप, स्पिरिट म्यूजिक ग्रुप, कोबाल्ट संगीत प्रकाशन लि।, रोयल्टी नेटवर्क
कि संग ...।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा आदिम मूर्तिकला
पिकासोको आधुनिकता अफ्रिकी आदिवासी मास्कबाट सुरू हुन्छ। आगोको वरिपरि नाच हामी सबै भित्र छ।
नर्तक अनावरण गर्न सकिन्छ। के कुरा मुनि पनी कुनै कुरा विश्वव्यापी एकल अनुभव हो।
बिच्छेदले व्यक्तिगतमा रीतिथितिलाई मार्ग दिन्छ। व्यक्ति अब घामको उज्यालोमा छ।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा अनुष्ठान
एक साधारण छवि को साथ, म तपाईको लागि चीजहरू टाई गर्न चाहान्छु। व्हेल न्यूनतावाद हो। दृष्टिकोण को हाम्रो हो। दृष्टि प्रकृतिको सागहरु हुनुपर्दछ, तर त्यो लामो समय लाग्दछ। साग को साग र कालो रातो मा बदलियो।
केवल हाम्रो दृश्य सरल छ।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा व्हेल
आशा छ मेरो सोच तपाई संग एक तार मा प्रहार गर्दछ। म सोच्न चाहन्छु कि हामी एक्लो छैनौं।
म fudged छ? के म यी कलाकृतिहरू मेरो आफ्नै रूपमा दावी गर्छु?
म पर्याप्त मूल हो?
धेरै कलाकारहरू मेरो अगाडि थिए मेरो प्रेरणा थिए। यससँग तपाईंको छलफल गर्नु मेरो लागि महत्वपूर्ण छ।
मेरो लेखनमा केहि क्षणहरू छन् जहाँ म तपाईंको समर्थनको लागि सोध्छु। अहिलेसम्म म भोकाएको कलाकार होइन। संघर्ष गर्ने कलाकारको रूपमा चुनौती दिन अब समय आएको छ। LOL
चीयर्स, डेव ब्रिडबर्ग
मेरो वेबसाइटमा छवि बिक्री पृष्ठ हेर्नको लागि तपाईं कल्पना गर्ने मेरा कुनै पनि छविमा क्लिक गर्नुहोस् (माथिको कभर छविमा लागू हुँदैन)।
प्रश्न: अमूर्त कलाले धेरै भन्न सक्दछ? तपाईलाई यो लेख एकदम चाखलाग्दो लाग्न सक्छ।